Degso Bandicam loogu talagalay Windows
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (22.30 MB)
Soo dejiso Bandicam
Bandicam waa duubista shaashadda bilaashka ah ee Windows. Si gaar ah, waa barnaamij duubitaan shaashad yar ah oo wax walba ku qabsan kara kombiyuutarkaaga oo ah fiidiyow tayo sare leh. Waxaad ku duubi kartaa aag gaar ah shaashadda PC -ga, ama waxaad duubi kartaa ciyaar adiga oo adeegsanaya tikniyoolajiyadda garaafyada DirectX/OpenGL/Vuhan. Bandicam waxay leedahay saamiga isku -darka sare waxayna bixisaa waxqabad aad u sarreeya barnaamijyada duubista kale iyada oo aan la bixin tayada fiidiyowga.
Bandicam waa barnaamij duubista shaashadda oo ka caawiya isticmaaleyaasha kombiyuutarka inay duubaan fiidiyowyada ciyaarta iyo duubista fiidiyowyada shaashadda, iyo sidoo kale inay leeyihiin astaamo waxtar leh oo dheeri ah sida qabashada shaashadda.
Barnaamijka kuu oggolaanaya inaad ku duubto waxqabad kasta oo aad ku samayso desktop -ka sida fiidiyow, waxaad sidoo kale fursad u leedahay inaad si fudud u doorato qaybta shaashadda aad rabto inaad duubto. Waxaad si dhakhso ah u goaamin kartaa qaybta aad ku qori doonto adiga oo kaashanaya daaqad hufan oo ah meesha bannaan ee ay ku siiso.
Muuqaalka ugu weyn ee ka sooca Bandicam barnaamijyada duubista shaashadaha kale ayaa shaki laaan ah xulashooyinka horumarsan ee ay siiso dadka isticmaala duubista fiidiyowyada ciyaarta. Iyada oo leh softiweerka taageera OpenGL iyo DirectX labadaba, waxaad si fudud u duubi kartaa fiidiyowyada dhammaan cayaaraha aad ciyaareyso oo isla markiiba aad u fiirsato qiimaha FPS ee cayaaraha inta lagu jiro duubista.
Iyada oo leh Bandicam, oo ku siineysa xulashooyin badan oo kala duwan fiidiyowyada aad rabto inaad duubto, waxaad ku goaamin kartaa FPS, tayada fiidiyowga, soo noqnoqoshada maqalka, bitrate, qaab fiidiyaha iyo waxyaabo kaloo badan. Haddii aad rabto, waxaad sidoo kale dejin kartaa xadka fiidyowyada, sida waqtiga ama cabirka faylka.
Habka duubista fiidiyaha shaashadda ka sokow, waxaad fursad u haysataa inaad sawir -qaadasho ka qaadato barnaamijka. Bandicam, oo sidoo kale ku siinaya fursad aad ku qabato shaashaddaha qaababka BPM, PNG iyo JPG, ayaa doorbidaya isticmaaleyaal badan oo kombiyuutar ah xitaa iyadoo ay ugu wacan tahay astaantan oo keliya.
Waxaad si sahal ah u tafatiri kartaa furayaasha furaha ee Bandicam, oo hal talaabo ka horreeya tartamayaashooda sababtuna tahay taageerada luqadda Turkiga, oo waxaad si dhakhso leh u bilaabi kartaa shaashadda ama habka duubista fiidiyowga ciyaarta adigoo riixaya hal fure furahaaga.
In kasta oo Bandicam uu yahay barnaamij lacag -bixin ah, oo leh nooca Bandicam ee bilaashka ah, adeegsadayaasha waxaa la siiyaa awoodda ay ku duubi karaan ilaa 10 daqiiqo oo ciyaar -ciyaar ah ama fiidiyowyo shaashad ah, laakiin waa faaiido in la ogaado in sumadda Bandicam lagu daray fiidiyowyada aad duubto.
Gabagabadii, haddii aad u baahan tahay softiweer leh astaamo horumarsan si aad u duubto fiidiyowyada shaashadda ama fiidiyowyada ciyaarta, waa inaad xaqiiqdii isku daydaa Bandicam.
Sida loo isticmaalo Bandicam?
Bandicam waxay bixisaa saddex ikhtiyaar: duubista shaashadda, duubista ciyaarta iyo duubista aaladda. Marka barnaamijkan, waxaad ku kaydin kartaa wax walba shaashadda kombiyuutarkaaga sida faylasha fiidiyaha (AVI, MP4) ama faylasha sawirka. Waxaad ku duubi kartaa ciyaaraha tayada 4K UHD. Bandicam ayaa suurtogal ka dhigaysa in la qabto 480 video FPS. Barnaamijku wuxuu kaloo diyaar u yahay Xbox, PlayStation, smartphone, IPTV, iwm. Waxay kaloo kuu oggolaaneysaa inaad ka duubto aaladda.
Qabashada/qaadashada fiidiyowga shaashadda Bandicam aad bay u sahlan tahay. Taabo astaanta shaashadda ee geeska bidix ee kore, ka dibna dooro habka wax lagu qoro (shaashadda qayb ahaan, shaashad buuxda, ama aagga dulmanaha). Waxaad bilaabi kartaa duubista shaashadda adiga oo gujinaya badhanka REC cas. F12 waa furayaasha kulul si ay u bilaabaan/u joojiyaan duubista shaashadda, F11 si ay u qaataan shaashadda. Nooca bilaashka ah waxaad ku duubi kartaa 10 daqiiqo oo summad -biyoodka ayaa ku dhegan hal gees oo shaashadda ah.
Duubista iyo duubista ciyaaraha Bandicam sidoo kale waa mid aad u fudud. Guji astaanta ciyaarta ciyaarta geeska bidix ee kore ka dibna riix badhanka REC cas si aad u bilowdo duubista. Waxay taageertaa duubista illaa 480FPS. Ku xigta badhanka duubista, waxaad ku arki kartaa macluumaad sida inta aad duubaysay, inta bannaan ee duubista fiidiyowga ay ku jiri doonto kombiyuutarkaaga.
Bandicam, waxaad sidoo kale fursad u leedahay inaad ka duubto shaashadaha aaladaha fiidiyaha ee dibedda ah. Xbox -kaaga, qalabka ciyaarta PlayStation -ka, casriga, IPTV iwm. Waxaad ka qaadan kartaa duubista shaashadda aaladahaaga. Si aad tan u samayso, guji astaanta HDMI ee ku taal geeska bidix ee sare ee barnaamijka, ka dibna dooro aaladda (saddex ikhtiyaar ayaa u muuqda: HDMI, kaamerada webka iyo qalabka wax lagu qoro). Bilow duubista adigoo gujinaya badhanka REC ee caadiga ah.
Waxaad ka arki kartaa sida loo isticmaalo duubista shaashadda Bandicam, duubista ciyaarta iyo habka duubista aaladda fiidyowyada hoose:
Cabirka Faylka: 22.30 MB
Wararkii Ugu Dambeeyay: 09-08-2021